လျှာတိုတဲ့ ဖမာ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လျှာတိုတဲ့ ဖမာ …
လျှာတိုတဲ့ ဖမာ …
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Sep 30, 2017 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 13 comments
ထိုင်းမှာ နေခဲ့တုန်းကပေါ့ …
ထိုင်းတွေက မြန်မာတွေကို မုန်းတယ် ၊ နှိမ်တယ် ဘယ်လိုပဲဆိုဆို … အေးရှန်း အိမ်နီးချင်းထဲမှာတော့ ဖမာ့ (မြန်မာ) တွေကို အတော်ခင်သား ။ အထူးသဖြင့် တတိယနိုင်ငံတစ်ခုမှာ ဆုံကြည့် ၊ သူတို့မှာ ဖမာ့တွေကိုတွေ့ရင် ဆွေရင်း မျိုးရင်းတွေ့ရသလို အတော်ပျော်ကြတာ ။ ပေါင်းလို့သင်းလို့လည်းကောင်း အတော် အနွံတာခံကြရှာပါတယ် ။ သူတို့အမြင်မှာ ဖမာတွေက သတ္တိကောင်းတယ် ၊ ပြောရဲဆိုရဲရှိတယ် … နိုင်ငံခြားသားကို မကြောက်တတ်ဘူးတဲ့ …
သူတို့ အစိုးရက ဘယ်လိုပဲ ဘရိန်းဝက်ရှ် လုပ်ထား လုပ်ထား ၊ သူတို့ အတွင်းစိတ်မှာ ဖမာ့တွေကို အတော် ကြည်ညိုကြတာဗျ … တကယ် ။ ထိုင်းတွေကြားမှာ ပညာမတတ် နဲ့ ပညာတတ်က အတော်ပေါင်းလို့ကောင်းတယ် ။ ပညာမတတ်က “ဦးအောင်ဇေယျ” တို့ “အယုဒ္ဓယ” တို့ကြောင့် ဖမာ့တွေက မိုက်ရူးရဲတွေဆိုပြီး အတိတ်ကအရိပ်ကြောင့် လန့်တယ် ။ ပညာတတ်တွေက သမိုင်းကြောင်းကို နားလည်တော့ အမြင်ရှိပြီး မနှိမ်တတ် ၊ လူကြီးလူကောင်းဆန်တော့ ပေါင်းလို့သင်းလို့ ကောင်းတယ် ။ ပေါင်းမကောင်းတာက ပညာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ကန့်လန့်ကောင်တွေ ခင်ည ၊ သူတို့က တဘက်ပိတ်တော့ အစိုးရမှိုင်းမိပြီး ဖမာတွေကို အလိုလို မုန်းနေတာ ။
တကယ့် သမိုင်းအမှန်မှာ “အယုဒ္ဓယ” က ဘုရားဆင်းတုတွေကို ခေါင်းချိုး ဖျက်ဆီးသွားတာ မြန်မာတွေချည်းမဟုတ်ဘူး ၊ မြန်မာဘုရင် ဆင်ဖြူရှင်ရဲ့တပ်တွေ ထွက်သွားမှ “အယုဒ္ဓယ” ကို ရောက်လာတဲ့ “တရုတ်စစ်တပ်” ခင်ဗျ ။ မြန်မာတွေ မသတ်ခဲ့လားဆိုတော့ “ဟုတ်ကဲ့ … သတ်ပါတယ်” ၊ ဘုရားဆင်းတုတွေ မဖျက်လားဆိုတော့ “အကုန်တော့ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ” ။ စစ်နိုင်ချင်တော့ “အယုဒ္ဓယ” အဝင်နားက ကိုးထပ်ကြီးလို ထိုင်တော်မူ ပဉ္စလောဟာ (သတ္တုစပ်) ဆင်းတုကြီးက ညာလက်ရုံးကို “အင်းအိုင်စမ” လောကီ အစီအရင်တွေလုပ်ပြီး ဖြုတ်ပါတယ် ။ ဦးနုခေတ်ရောက်မှ လက်ရုံးကို ပြန်တပ်ပေးတာပါ ။
ဟိုးအရင်ကတော့ ထိုင်းတွေက ဖမာဆိုရင် လူကောင်းတွေလို့ ယေဘူယျ သတ်မှတ်ထားတာပါ ။ သူတို့ ထိုင်း အမျိုးသား အတော်များများက ပွေရှုပ် သောက်စားတွေကိုး ။ အဲသည့်လိုပါပဲ … ထိုင်း အမျိုးသမီးတွေကလည်း အော့ကြောလန် … သောက်စား အနေအထိုင် စည်းကမ်းမရှိ ။ အဲသည့်တော့ မြန်မာမလေးတွေဆိုရင် ထိုင်းတွေက အတော် တန်ဘိုးထားကြတာ ။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ် ခင်ပွန်းကိုရိုသေပြီး အိမ်ထောင်မှုနိုင်နင်းတယ် ၊ အဓိက “ပင်ကိုယ် သဘာဝ အလှနဲ့ လှတယ်” တဲ့ … ။ ဝုတ်တယ်လေ … ထိုင်းမတွေက မိတ်ကပ် တစ်လက်မလောက်ထူအောင်လူး ၊ ရှိစုမဲ့စုတွေဖော် ၊ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်နိုင်မှ ရုပ်ထွက်တာကိုး ။
ကျောင်းနေဘက် ထိုင်းလူမျိုး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အဖေဆိုရင် သူ့သားကို မြန်မာမ ယူဖို့ချည်း တိုက်တွန်းတာပဲ ။ ဆြာကျောက်စ်ကိုလည်း သူ့သားအတွက် မြန်မာမ လှလှလေးရှာပေးဖို့ ပူဆာတတ်ပါတယ် ။ ဆြာကျောက်စ်ကလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် အဖြစ်မရှိ ၊ သူ့သား လူပျိုကြီးကလည်း မတုန်မလှုပ်ဆိုတော့ ဘိုးတော်က ဒေါဖောင်းပြီး “ငါနဲ့ နေရာချင်းလဲလိုက်ချင်ရဲ့ ၊ မင်းအမေ ဘဲစာကျွေးမှာ ကြောက်လို့ပေါ့ကွာ” ဆိုပြီး ရယ်သလိုမောသလိုနဲ့ မချင့်မရဲ ပြောတတ်ပါတယ် ။ သူ့နှမလေးတွေကျတော့လည်း ဆြာကျောက်စ် ရွာပြန်ရင် “သနပ်ခါး ကောင်းကောင်း” မှာကြပါတယ် ။ ဘန်ကောက်မှာ လေထုညစ်ညမ်းလို့ အသားအရေ ပျက်စီးရသတဲ့ ။ သူတို့လေးတွေက ညနေအိမ်ပြန်ရောက်ရင် သနပ်ခါးကို ဖုံနေအောင် လူးပြီးမှ အိပ်ရာဝင်ကြတာခင်ဗျ ၊ ရနံ့မွှေးပြီး အသား အေးတယ်ဆိုပဲ ။ သူတို့တင်မဟုတ် … ကြုံဖူးသမျှ အတော်များများသော ထိုင်းခေးမတွေလည်း သနပ်ခါးမှာတတ်ကြပါတယ် ။
ယနေ့လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ မြန်တျန့်တွေခမျာ ပြည်တွင်းမှာ စီးပွါးရေးကလည်း မကောင်း ၊ လုပ်စားကိုင်စားဖို့လည်း အဆင်မပြေဆိုတော့ ၊ ဝမ်းဝ ခါးလှဖို့ ရေကြည်ရာ မျက်နုရာ ထိုင်းတို့ပြည်ကို ထွက်လာကြတာ လူ သန်းနဲ့ချီနေပါပြီ ။ စရိုက်တွေကလည်း မျိုးစုံဆိုတော့ ဟိုးအရင်လို မဟုတ်တော့ဘူးလေ ၊ ဖမာ့ဆိုရင် အမြင်တမျိုးတွေ ဖြစ်လာတယ် ခင်ဗျ ။ နယ်စပ်ကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ မြို့ကြီးတွေကို အလုပ်လုပ်ဖို့ တရားမဝင် ဝင်လာတဲ့ ဖမာတွေကလည်း မနည်းမနောဆိုတော့ ၊ သူတို့ စစ်တပ်လည်း ဂိတ်တွေချပြီး အတော်စီစစ်ရတာပေါ့ဗျာ ။ ခက်တာက … ဖမာနဲ့ ထိုင်းက ရုပ်ရည်ကလည်း အတော်တူ ၊ ဖမာတွေက ထိုင်းလိုလည်း အတော်ရွှီးတတ်တော့ ထိုင်းစစ်တပ်အဖို့ အတော်ခေါင်းခြောက်ရတာပေါ့ ။
နောက်ဆုံးတော့ သူတို့လည်း ခေတ်ဆွေးက နည်းလမ်းဟောင်းကြီးကို အသုံးပြုရတော့တာပါပဲ ။ အဲဒါကတော့ “ထိုင်း နိုင်ငံတော်သီချင်း” ကို ဆိုခိုင်းတာခင်ဗျ ။ ထိုင်းရာဇဝင်သမိုင်းနဲ့ ဘုရင်တွေအကြောင်းကို ထိုင်းတွေထက် ပိုသိတဲ့ “ဖမာ တောင်ကျော်” တွေလည်း အဲသည့်တော့မှ ကွဲတော့တယ် ။
တောင်ကျော် မြန်မာတွေ “ထိုင်း နိုင်ငံတော်သီချင်း” လောက်တော့ ဆိုတတ်တာပေါ့ခင်ဗျာ ၊… ကွန့် ညွန့်နေတာပဲ … အော်လဂျင်နယ် ထိုင်းတွေထက်တောင် သာသေး ။ ဒါပေမဲ့ အသံ အတင် အချ နေရာတစ်ခုမှာ “ရှ” နဲ့ “သျှ” မကွဲတော့ … ဆိုခိုင်းလိုက်ရင် ၉၀% လောက် မိပါလေရောဗျာ …
ထိုင်းတွေကပြောတယ် … “နင်တို့ ဗမာစကားက မာမာတောင့်တောင့်ကြီး ၊ မပျော့ပျောင်းဘူး … လျှာတိုတာကိုး” တဲ့ ခင်ဗျား …
မပြန်ပါရစေနဲ့ လို့ ပြောတော့မရဘူး
ထိုင်းတွေက သူတို့ကို ယိုးဒယားလို့ ရည်ညွှန်းရင် မကြိုက်ချင်ဘူး …
ယိုးဒယားဆိုတာ “အယုဒ္ဓယ” ကနေ ကာလရွေ့လျောလာတာ …
သူတို့ကို စစ်ရှုံးလို့ နှိမ့်ချပြီး ခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်ဆိုပဲ …
ကျနော်ကတော့ တောင်တွင်းရှင်ငြိမ်းမယ်ရဲ့ စစ်မှာတစ်မူ(အိုင်ချင်း) ထဲကလို …
“ယွန်းမလေးတွေ” လို့ ခေါ်တယ် … ဟီး
အ,ယုဒ္ဓယ ဆိုတာက.. လုပ်ကြံလို့မရတဲ့ဒေသဆိုလား.. မြို့ဆိုလားပဲ..။
ဗမာတွေက.. အ ဖြုတ်ပြီး.. ယုဒ္ဓယလို့ခေါ်တာ.. လုပ်ကြံ(တိုက်ယူ) လို့ရတဲ့မြို့ အဓိပ္ပါယ်လို့ မှတ်မိတာပဲ..။
အဲဒီကနေ.. ယုဒ္ဓယ.. ယိုးဒယားဖြစ်လာတာ.. တဲ့.။
“အယုဒ္ဓယ” မြို့တည်ဘုရင်က “U Thong” တဲ့ …
ရာဇဝင်တွေထဲမှာတော့ ပြည်ကြီးပေါက် တရုတ်လို့ဆိုတယ် …
အဲဒါကြောင့် အယုဒ္ဓယစစ်ပွဲမှာ တရုတ်က စစ်ကူပို့လိုက်တာ …
မြန်တျန့်တပ်တွေ ထွက်သွားမှ တရုတ်တပ်တွေ ရောက်လာသတဲ့ …
အလာကောင်းပေမည့် အခါနှောင်းသွားတယ်ပေါ့ …
ဟုတ်တယ် အန်တီအေး … အဲသည့် ဘုရားကို ရောက်ဖူးတယ် …
ထောင့်တွေက ကင်းမြီးကောက်ကြီးတွေများ အတော်အသက်ဝင် …
ဘုရားမှာ ထိုင်းတွေ ထီးပြန်တင်တိုင်း မိုးကြိုးပစ်တာလည်းတွေ့ဖူးတယ် …
ဘုရင်ကိုယ်တိုင် ထီးတင်တာတောင် မရဘူးလို့လည်းဆိုကြတာပဲ …
ဘိုခင်ညွန့်က နဂါးနှစ်ကောင်ဆရာတော်နဲ့ ထီးတင်မှ ရတော့တယ် …
မကြုံဖူးရင် ယုံရခက် … တာချီလိတ်နေဖူး ကိုယ်တွေ့မို့သာ …
ဒီလိုအစီအရင်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုထိုင်းတွေကမသိခဲ့လို့ သာအန်တီရောက်တဲ့
တပါတ်လောက်အကြာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့၊ယိုးဒယားတွေကထိတ်လန့် ပြီး၊ဗမာနဲ့ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်
တွေကနေ့ စဉ်ရက်ဆက်ညို့ မှိုင်းနေတာပဲ၊စိတ်ထဲမှာလည်းဘုရားဖူးသွားတဲ့ခါတိုင်းရင်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်ပီးခံစားရတယ်။
ကျနော်နေခဲ့တာက ၁၉၉၂ – ၁၉၉၃ …
တောင်ထိပ်က ဦးအောင်ဇေယျဘုရားကို ခဏခဏရောက်တယ်…
အခု တောင်ခြေအတက်လမ်းမှာ ဈေးတန်းကြီးဖြစ်သွားပြီ …
ဘန်ကောက်က ရောက်လာတဲ့ လေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် နည်းပညာရှင် ထိုင်းတစ်ယောက်နဲ့
တောထဲတောင်ပေါ် ခရီး ထွက်ခဲ့ရသေး။ မြန်မာပြည်ရဲ့ မြေပြင်အခြေအနေတချို့ကို ကိုယ်တွေ့ တွေ့သွားပြီးနောက်…
အဲဒီထိုင်းလည်း နောက်တစ်ခါ ဗမာပြည်ကို လာချင်မယ်မထင်တော့….
သူတို့ထိုင်းဟာ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည် ဆိုပေမဲ့…
စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ဖို့ ဥပဒေကျမ်းကတော့ တကယ့် တတ်သိ ပညာရှင်တွေ ရေးဆွဲထားတဲ့ ခြေ/ဥ တဲ့။
ပညာတတ်ထဲကမို့ အဲဒီထိုင်းကိုကိုက ဗမာတွေကို အထင်သေးပုံတော့မရ…
တောထဲ အသွားမှာတော့ တံတား မရှိတဲ့ ချောင်းထဲလည်း ဆင်းကူးရ….
ခြင်ကိုက် မြွေပေါတဲ့ တောထဲလည်း အိပ်ရ
ဆီတွေ နင့်နေတဲ့ တောခေါက်ဆွဲကြော်ညံ့ညံ့နဲ့လည်း နေ့လည်စာ ညစာ စားခဲ့ရ…
နောက်တစ်ခေါက် ဗမာပြည်ကို ခေါ်လို့တောင် ရမယ် မထင်…
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ခြေ/ဥ အဟောင်းကိုဖျက်ပြီး …
သူတို့အနေအထားကို အသာစီးပေးထားတဲ့ ခြေ/ဥအသစ် ပြန်ဆွဲတာပါ …
မြန်တျန့်စစ်တပ်ကို အကူအညီတောင်း ၊ နမူနာတောင် ယူသွားသေးတယ် …
ခုလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမယ်လို့ လေတော့လွှတ်နေတာပဲ …
ဟဲ ဟဲ … သူတို့လည်း တစ်မတ်သား လာဦးမယ်ထင်ရဲ့ …
ခုက လျှာမတိုတေ့ဘူး။ လျှာရှည်တဲ့ဗမာဖြစ်နေပြီ… သူတို့မသိသေးတာဖြစ်မယ်…
ထိုင်းစကားက လေပျော့ပျော့နဲ့ အတော်ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ပြောနိုင်မှ ပီသပြီး ယဉ်ကျေးသတဲ့…
မြန်မာစကားက သိတဲ့အတိုင်း လေသံပြတ်ဆိုတော့ လျှာတိုတယ်လို့ ပြောကြတာ …
ထိုင်းစကားက…ထိုင်းယောက်ျားတွေပြောနေတာတောင်.. ဂျပန်တွေကြားရင်.. (နှိမ်ပြောတာတော့မဟုတ်) ဂေးတွေလို့ထင်ကုန်တာအထိ.. ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ကြားရတာ..။
မြန်မာကျ.. နည်းနည်းနွဲ့ပေမယ့်… ထိုင်းလောက်တော့မဆိုး..။
မြန်မာယောက်ျားချင်း.. အရက်ဆိုင်မယ်.. ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောနေကြရင်… ဘေးကနားမလည်တဲ့သူက.. ရန်ဖြစ်နေတယ်တောင်ထင်တတ်ပြီး.. ဂျပန်စကားအသံထွက်နဲ့လည်း.. ဆင်..။